Himalaya Dainik » कसरी सुरु भयो फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन ?
हामिले कसैलाइ फोन गर्दा शुरुमा हल्लाे भनिन्छ, याे शब्द किन प्रयाेग हुन्छ त ? फोनमा सुरुमा हेल्लो दुनियाभरका देशले भन्ने गर्छन् । आखिर फोनमा यसरी हेल्लो भन्ने चलन कसरी र कहिलेदेखि सुरु भएको होला ? यो जान्ने चाहना धेरैमा हुन सक्दछ ।
अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए । सन् १८७६ को मार्च १० मा उनले टेलिफोनको आविष्कार गरी पेटेन्ट अधिकार लिए । टेलिफोन आविष्कार गरेसँगै सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो साथी वाट्सनलाई सन्देश प्रेषित गर्यो, ‘श्रीमान वाट्सन यहाँ आउनुहोस् मलाई तपाईको आवश्यकता परेको छ ।’ स्मरण रहोस् ग्राहम बेलले फोनमा ‘हेल्लो’ होइन ‘Ahoy’ शव्द बोल्दथे ।
टेलिफोनको आविष्कारपछि जब मानिसहरुले यसको प्रयोग सुरु गरे तब मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले बोल्ने वाक्य थियो, Are you there ? तपाईले मलाई सुनिरहनु भएको छ ? भन्ने अर्थको उक्त वाक्य बोल्नुको कारण चाहिँ आफूले फोनमा कुरा गरिरहेको व्यक्तिसामु आफ्नो आवाज पुगेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु नै थियो ।
एकपटक थोमस एडिसनले Ahoy शव्द गल्ती सुनेछन् । त्यसपछि सन् १८७७ मा उनले हेल्लो भन्ने शव्द बोल्ने प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्ताव पास गराउनका लागि थोमसले पिट्सबर्गको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट एण्ड प्रिन्टिङ्ग टेलिग्राफ कम्पनीका अध्यक्ष टिबिए स्मिथलाई पत्र लेखेर टेलिफोनमा पहिलो शव्द हेल्लो बोल्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि उनले गरेको पहिलो फोनमा हेल्लो शव्द बोले ।
अक्सफोर्ड अंग्रेजी शव्दकोषका अनुसार हेल्लो शव्द पुरानो जर्मन शव्द ‘ह्यालो’ वा ‘होल्लो’बाट आएको हो । उक्त शव्द पुरानो फ्रेन्च वा जर्मन शव्द ‘होला’ बाट आएको हुनसक्छ । ‘होला’को अर्थ ‘कस्तो छ ?’ भन्ने हुन्छ ।